Liverool oo iska xaadirisay siddeed dhamaadka Carabao Cup, kaddib kulan 10 gool leyska dhaliyay oo ka dhacay Anfield… +SAWIRRO – Gool FM
Liverool oo iska xaadirisay siddeed dhamaadka Carabao Cup, kaddib kulan 10 gool leyska dhaliyay oo ka dhacay Anfield… +SAWIRRO
Dajiye October 30, 2019
(Liverpool) 31 Okt 2019. Liverpool ayaa u gudubtay wareega siddeed dhamaadka koobka Carabao Cup, kaddib markii ay Arsenal kaga adkaatay, rigoorayaal 5-4 ah, xilli 90-ka daqiiqo ee ciyaarta ay ku soo idlaatay barbaro 5-5 ah, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 16-ka ee tartankan.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 2-3 ay ku hogaamineysay kooxda martida aheyd ee Arsenal.
Daqiiqadii 6-aad ee qeybta hore ciyaarta Liverpool ayaa hogaanka u qabatay dheesha, kaddib gool kam ah uu iska dhaliyay daafaca kooxda Arsenal ee Shkodran Mustafi, waxayna ciyaarta sidaas ku noqotay 1-0.
Daqiiqadii 19-aad kooxda Arsenal ayaa heshay goolka barbaraha waxaana u dhaliyay Lucas Torreira, dheesha ayaana sidaas ku noqotay 1-1.
26 daqiiqo Gabriel Martinelli ayaa hogaanka u dhiibay markan kooxdiisa Arsenal wuxuuna dheesha ka dhigay 1-2.
36 daqiiqo Gabriel Martinelli ayaa markale gaaray shabaqa kooxda Liverpool wuxuuna dheesha ka dhigy 1-3, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Bukayo Saka.
43 daqiiqo Liverpool ayaa heshay rigoore waxaana gool u badalay James Milne, dheesha ayaana sidaas ku noqotay 2-3.
54 daqiiqo kooxda Arsenak ayaa heshay gool waxaana 2-4 ka dhigay Ainsley Maitland-Niles, waxaana goolkan ka caawiyay xiddiga reer Germany ee Mesut Ozil.
58 daqiiqo xiddiga kooxda Liverpool ee Alex Oxlade-Chamberlain ayaa wuxuu dheesha ka dhigay 3-4, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Adam Lallana.
62 daqiiqo Liverpool ayaa heshay goolka barbaraha waxaana 4-4 ka dhigay dheesha Divock Orig, iyadoo uu goolkan ka caawiyay Curtis Jones.
70 daqiiqo marka ay ciyaarta aheyd kooxda Arsenal ayaa markale hogaanka u qabatay dheeshay, kaddib markii uu gool inaba aan caadi aheyn uu dhax dhigay shabaqa kooxda Reds da’ayarka Joseph Willock, waxayna ciyaarta sidaas ku noqotay 4-5.
90 daqiiqo Liverpool ayaa markale heshay goolka barabaraha waxaana 5-5 ka dhigay Divock Origi.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo idlaatay barbaro 5-5 ah, waxayna Liverpool awooday in rigoorayaal 5-4 ah ugu gudubtay wareega siddeed dhamaadka ee tartanka Carabao Cup.
RASMI: PSG oo heshiis cusub waqti dheer ah ka saxiixatay mid ka mid ah xiddigaheeda ugu muhiimsan
Man United oo u gudubtay wareega siddeed dhamaadka Carabao Cup, kaddib markii ay Chelsea kaga soo adkaatay Samford Bridge… +SAWIRRO